Oettis Hütte am Hainer See mit Kamin+Kanu+Rädern - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKai
I-Öttis Cottage e-Hainer Lake ezantsi kweLeipzig ayinayo iinkwenkwezi ezi-5 njengehotele yeklasi ephezulu, kodwa i-charm ekhethekileyo kakhulu yendlu yokhuni yanamhlanje eneyadi eluhlaza ye-1.000 squaremetres. Endaweni ye-Wifi kunye ne-hightech kukho umbono omangalisayo kumanzi kunye nemithi eneziqhamo ezidliwayo. Ilungele abantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2. Kukho isixhobo esifanelekileyo seentsuku ezimbalwa ezitofotofo echibini, nasebusika. Ungasebenzisa iibhayisekile ezi-4 ngobukhulu obuhlukeneyo.
4.88 · Izimvo eziyi-209